Faruur - Wikipedia
xidido yar dhiig, (superior labial)
Inferior labial vein (superior labial)
Faruur, Bushin, ama Dibin (; ) wadartu waa Faruuryo, ama Dibno, iyo Bishimo, waa qaybta jilicsan ee ku hareeraysan afka, waxay dareentaa kulka cuntada inta aan afka la galin, waxayna saamayn ku leedahay ama ka qaybqaataan hadalka iyo dhawaqiisa, waxaana loo adeegsadaa dhunkashada ama shuminta ilmaha ama qof la jecelyhay.
1 Samayska faruuraha
2 Dildilaaca Bishimaha
Samayska faruuraha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Faruurta ayaa ka kooban qayb sare oo ka samaysan maqaar jilicsan oo ku daboolan qayb sidii cinjir oo kale ah, iyo muruq iyo heleb ku dhex samaysan,
Dildilaaca Bishimaha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
„Waxaa jira dahab iyo luul badan, Laakiinse bushimihii aqoon lahu waa jawharad qaali ah.”
„Kii necbaanta qariyaa wuxuu leeyahay bushimo been badan, Oo kii xanta ku hadlaana waa nacas.”
„Maxaa yeelay, afkaygu run buu ku hadlayaa; Oo bushimahayguna shar bay karhaan.”
„Waayo, naagta qalaad bushimaheedu waxay daadiyaan malab, Oo afkeeduna saliid buu ka sii macaan yahay,”
„Kii xigmad leh erayada afkiisu waa raxmad miidhan, laakiinse bushimaha nacasku isaga qudhiisay baabbi'iyaan.”
„Mid kale ha ku faaniyo oo yaanu afkaagu ku faanin, Shisheeye ha ku ammaano, oo yaanay bushimahaagu ku ammaanin.”
„Bushimaha beenta sheega Rabbigu Yehowah wuu karhaa. Laakiinse kuwa runta ku shaqeeya wuu ku farxaa.”
„Haddaba xaggiisa aynu had iyo goor Ilaah ugu bixinno allabariga ammaanta, kaas waxaa weeye dibnaha magiciisa qirta midhahooda.”
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Faruur&oldid=219280"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 12 Oktoobar 2021, marka ee eheed 10:14.